हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपात सुरुः चिसो वढदै | suryakhabar.com
पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनः कार्य प्रगति साउन भित्रमा बुझाँनुस्
कम्युनिष्ट पार्टीलाई वैचारिक रुपमा स्पष्ट बनाउन आवश्यकः नेता नेपाल
लकडाउन अन्त्य गर्ने अपरिपक्व निर्णयः डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ
आज थपिए १०० जना कोरोना संक्रमित, थप दुईको निधन पुष्टी
पुष्पलालको चाहना आज हामीले धेरै हदसम्म पूरा गरेका छौंः प्रधानमन्त्री
Home पु.समाचार हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपात सुरुः चिसो वढदै
हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपात सुरुः चिसो वढदै
on: १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:२८ In: पु.समाचारTags: No Comments
बाजुरा । जिल्लाका उच्च हिमाली भेगमा हिमपात भएको छ । हिमाली भेगमा हिमपात शुरु भएसँगै जिल्लामा चिसो बढेको छ । हिमपात बिहीबार साँझदेखि शुरु भएको हो ।
हिमाली भेगमा हिमपातसँगै तल्लो क्षेत्रमा पानी पर्न थालेको छ । असोजपछि पहिलोपटक पानी पर्न थालेको हो । आकाशको पानीले खेती गर्नु पर्ने हुँदा किसानले हालसम्म पनि पाखो जमीनमा हिउँदे खेती गरेका छैनन् ।
पानी पर्न थालेपछि किसानलाई केही आश थपिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका कृषि प्रशासन अधिकृत मीनप्रसाद जैशीले जानकारी दिएका छन् । किसान आकाशे पानी कुरिरहेका छन् तर उच्च हिमाली भेगमा परेको हिमपातसँगै चिसोले जनजीवन सामान्य भए पनि प्रभावित बनेको छ ।
बिहीबार साँझपखबाट एकाएक मौसम बदली भएको थियो । अहिले बिहानसम्म बाजुराको आकाशमा घामसमेत देखिएको छैन् । बडिमालिका, बूढीनन्दा, पोरखे, बढालेकलगायतका हिमालमा हिउँ पर्न शुरु भएको छ ।
बूढीगङ्गाका गाउँमा विशषेज्ञ सेवा
जिल्लाको बूढीगङ्गा नगरपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी गाउँमा विशषेज्ञ सेवा सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक अभावले रोग पाली बसेका अति विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी गाउँमै सेवा सञ्चालन गरेको हो ।
चिकित्सक नै गाउँमा पुर्याएर सेवा दिने गरी विशषेज्ञ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको बूढीगङ्गा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक दीपक शाहले बताउनुभएको छ । नगरपालिकाले घरमै पुगेर उपचार सेवा शिविर सञ्चालन गरे पनि विशषेज्ञ नै लिएर पहिलोपटक सेवा दिएको हो ।
नगरपालिकाभित्रका १० वटै वडाका प्रत्येक बस्तीमै पुगेर सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । दिन बिराएर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय स्वास्थ्य शाखाको छ । सेवा दिन बिहीबारदेखि नगरपालिकाको केन्द्र रहेको ५ नम्बर वडाबाट शुरु गरेको छ ।
आर्थिक अभावले रोग पाली बसेका र स्वास्थ्य संस्था टाढा भएर उपचार सुविधा लिन नसकेका वृद्धवृद्धा, महिला, असाहय, अशक्तलाई उपचार सेवामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित सेवा दिन थालिएको संयोजक शाहको भनाइ छ ।
नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नै वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा सेवा दिने काम थालिएको हो । विशषेज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन एमडिजिपी डाक्टर दुर्गाराज महर्जनसहितको टोली खटिएको छ । टोलीले बिरामीको चेकजाँच, आवश्यक परामर्श र औषधि दिने कार्य गरेको छ ।
गाउँमा उपचार सम्भव नभएको बिरामीलाई थप उपचारका लागि रिफर गर्ने र अति विपन्न समुदायको भए नगरपालिकाले नै उपचार सुविधा दिने गरेको बताइएको छ । सबैको स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच नहुने र उपचारका लागि आर्थिक समस्या पनि देखिने भएकाले गाउँमै विशषेज्ञ पठाएर सेवा दिन थालिएको नगर प्रमुख दीपकविक्रम शाहले बताए ।
बूढीगङ्गा नगरपालिकाले यसै साता कुपोषित बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र घरघरमा स्वास्थ्य शिक्षा दिन टोली पठाएको थियो ।
अमेरिकामा नेपालीहरूको धन्यवाद दिवस
तीन करोड जनता एकबद्ध हुँदा पनि सीमा विबाद अन्त्य प्रयास किन बिलम्ब/अलमल ?
कोरोनाका कारण नेपालमा थप एकको निधन, पुग्यो ४१ जना
७ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:३५
लामो दूरीका यातायात भदौ १ देखि खुल्ने, जोरबिजोर भने हट्यो (बिस्तृतमा)
६ श्रावण २०७७, मंगलवार २१:४०
आज मध्यरातदेखि लकडाउन हट्योः मन्त्री खतिवडा
६ श्रावण २०७७, मंगलवार २०:३१
राखेप सदस्य सचिवमा थापा , सिलवाल र श्रेष्ठको नाम सिफारिस
पहिलो रिचार्ज र प्रत्येक १०० को खर्चमा बोनस डेटा
मनसुन कमजोर बन्दैः जोखिम टरिसकेको छैन
अख्तियारद्वारा घुससहित सबइञ्जिनीयर भट्ट नियन्त्रणमा
धुसेनी शिवालय अस्पतालमा एक्स–रे सेवा शुरु
७ श्रावण २०७७, बुधबार १४:०९
देशैभरि गुर्जोको बिरुवा निःशुल्क वितरण
७ श्रावण २०७७, बुधबार ०७:४२
१३ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:२८